फाल्गुनन्दका अध्यक्षः गाउँ–गाउँ हिँड्छन्, मास्क बाँढ्छन्, हात धुन सिकाउँछन् « Mechipost.com
फाल्गुनन्दका अध्यक्षः गाउँ–गाउँ हिँड्छन्, मास्क बाँढ्छन्, हात धुन सिकाउँछन्
प्रकाशित मिति: १९ चैत्र २०७६, बुधबार २२:२०
कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) सङ्क्रमणको खतरा बढ्दै जोखिम न्यूनिकरण, सतर्कता, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, तथा सचेतनाका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका खोज्न थालियो । आजपर्यन्त स्थानीय तहहरु आ–आफ्नो बलबुता र विवेकको प्रयोग गरी आफ्नो भूमिका पूरा गर्न सक्रिय छन् ।
तर त्यहि भूमिका पूरा गर्नेपर्ने जिम्मा पाएका पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर कुरुम्बाङ त्यत्ति सिमित हुनुहुन्न । गाउँ–गाउँ हिँड्नुहुन्छ अनि मास्क बाँढ्नु हुन्छ । मास्कको सुरक्षित प्रयोग कसरी गर्ने ? कसरी सफा गर्ने र पुनः प्रयोग गर्ने ? कहाँ लगाउने र कहाँ नलगाउने ? भनेर सिकाउनु हुन्छ ।
गाउँपालिकाबाट गाउँपालिका भित्र हालसम्म करीब ७ हजार ५ सय थान मास्क वितरण भइसकेको छ । त्यसमध्ये हजाराँै अध्यक्ष कुरुम्बाङ स्वयम्ले गाउँ–गाउँमा वितरण गर्नुभएको छ । सामान्य काम गरेर उहाँ थाक्नुहुन्न । “फाल्गुनन्दको ६ र ७ का पुग्नैपर्ने घरहरुमा पुगेँ । आफैँ सचेत मानिसहरुलाई भनिरहन परेन्”, कुरुम्बाङले भन्नुभयो, “फेरी जनतासँग जान पनि पाएँ ।”
“जान्ने बुझ्नेले मास्क खरिद गरेर लगाउनुभएकै छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्ने उपायहरु अपाइरहनु भएकै छ”, कुरुम्बाङले थप्नुभयो, “मास्क खरिद गरेर प्रयोग गर्न नसकेका गाउँपालिकावासीलाई मास्क दिँदै सङ्क्रमणबाट बच्ने उपायवारे वताउँदै आएको छु ।”
एकै कार्यपालिका बैठकमा अध्यक्ष कुरुम्बाङले क्वारेन्टाइनको ब्यवस्थापन, पीपीई लगायत स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका सामग्रीको प्रवन्ध, कोरोना भाइरस सङ्क्रणको आशङ्का गरिएका विरामीहरुको चेकजाँचका लागि आवश्यक औजार, उपकरण सामग्रीको प्रवन्ध, गाउँपालिकाको विपत ब्यवस्थापन कोष निर्माण गर्ने निर्णय गराउनुभयो । यति गरेपछि गाउँ कार्यपालिकाले काम गर्न पायो ।
विपत ब्यवस्थापन कोष बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखेपछि सबै गाउँ कार्यपालिका सदस्यको एक महिनाको सुविधा त्यहाँ जम्मा गराउने प्रस्ताव गर्नुभयो । एकैपटक लाखौँ रकम स्वस्फुर्त जम्मा हुने भयो । गाउँपालिकालाई आर्थिक भार परेन् ।
गाउँपालिका भित्र खटिने प्रहरीको मर्म पनि बुझ्नुभयो । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनिकरण, सतर्कता, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, तथा सचेतनाका लागि गाउँपालिका भित्र खटिने प्रहरीलाई अतिरिक्त भत्ता दिने निर्णय गराउनुभयो । प्रहरीलाई इन्धनको प्रवन्ध समेत गाउँपालिकाले नै गर्ने भयो । प्रहरीको मनोबल धेरै उक्सियो ।
क्वारेन्टाइन बन्यो र सञ्चालनमा आयो । राँकेमा स्वास्थ्य सहायता कक्ष (हेल्थ डेक्स) सञ्चालनमा आयो । फाल्गुनन्द गाउँपालिकाबाट मात्रै विदेशबाट आउनेहरुको पूरा विवरण रहेको सूचि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आइपुग्यो । र त गाउँपालिका अध्यक्षलाई मास्क बाँढ्ने र मिचिमिचि हात धुन सिकाउँदै हिड्ने फुर्सद मिल्यो ।
“केही दिनदेखि यसैमा लागिरहेको छु । साबुन पानीले हात धुने, दूरी कायम राखेर काम गर्ने, विदेशबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा पठाउने, कोभिड–१९ सँग लक्षण मिल्ने विरामी भेटिए स्वास्थ्य संस्थामा पठाई हाल्न सबैलाई भन्दै आएको छु”, अध्यक्ष कुरुम्बाङले भन्नुभयो, “सतर्कता र सजगता नै सङ्क्रमणबाट बच्ने उपाय रहेछ । त्यो सबैले बुझिदिए ठूलो सङ्कटमा परिने थिएन् ।”